GAMTAAN DHABBILLEE SIYAASAA SHANANII GARA HOJII HIIKA QABUUTTI JIJJIIRAMU QABA! – YEROOBLOG
GAMTAAN DHABBILLEE SIYAASAA SHANANII GARA HOJII HIIKA QABUUTTI JIJJIIRAMU QABA!
Yerooblog	Oromia &Ethiopia, Politics	 October 31, 2015 December 25, 2015 2 Minutes
Gidduu kana Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) fi dhaabilleen siyaasaa afur ( Adda Bilisa Baasaa Uummata Ogaadeen, Adda Bilisa Baasaa Uummata Sidaamaa, Adda Bilisa Baasaa Uummata Gambeella fi Adda Bilisa Baasaa Uummata Beenishaangul) Osloo, Noorweeyitti walitti dhufanii waliin hojjechuuf gamataa dhaabbataniiru. Dhuguma dubbachuuf taanaan, gamataan kun uumamuunsaa uummata Oromoofi uummatoota mootummaa aangoorra jiruun cunqursamaa, dhiibamaa fi lafaaf qabeenya isaanii saamamaa jiraniif oduu gammachiisaa dha jedheen amana.
Qofa qofaa fiiguura, dhaabbileen siyaasaa haala kanaan waliin hojjechuuf murteessuun isaanii uummata bakka bu’anii qabsaa’aniif abdii guddaa dha. Yoo waliin hojjetan, beekumsa, qabeenya fi humna qaban walitti fidanii diina ofii injifachuuf baay’ee gumaacha. Tokkummaan humna jedhama mitiiree. Tokkumman yoo hojjetan kayyoo ofii galmaan ga’achuun ni salphata;ni ariifatas. Tokkoomuun diina ni rifaasisa; fira ni onnachiisa.
Kanaan dura kan dhabame ture tokkummaa dha. Dhaabilleen mootummaa aangoorra jiru kana morman ykn falman hedduu dha. Garuu, waliin hojjechuu aadaa hingodhanne. Dhabbilleen siyaasaa hunduu mata mataan fiiguu. Kun immoo bu’aa barbadamu argamsiisuu hindandeenye. Amma dhaabbilleen kunniin waan kana sirriitti kan hubatan fakkaatu. Amma yeroo kamiyyuu caalaa yeroo itti tokkummaan barbaachisu dha. Qophaa fiiguun diinaatiin salphaatti rukkutamuuf nama saaxila. Haala kana hubatani dhaabbillen shanan armaan oliitti maqaa dhahman walitti dhufanii waliin hojjechuuf murteessuun isaanii uummata bilisummaa baay’isee barbaaduuf abdii guddaadha.
Haata’u malee, gamataa dhaabbatanii addaan bahuun jijjiirama fidu hinqabu. Gamtaan uumame hojii qabatamaa hojjechuun irra eegama. Gamtaa dhaabbaneera jedhanii torban tokko guutaa miidiyaa irratti odeessuun qofaan galama miti. Dhugaadha, dhimma kana uummata biraan ga’uuf hojiin piropogaandaa hojjetamuu qaba. Kanaaf immoo miidiyya sirriitti fayyadamuun nibarbaachisa. Akkas yoo ta’e malee, kayyoon gamtaa kanaa maal akka ta’e uummata biraan ga’uun hindanda’amu. Dhugumma, uummanni bala’aan gamataa dhaabbate kana deeggaruu ykn bira dhaabbachuu kandnada’u, sirriitti waan gamtaan kun hojjechuuf yaadu ykn hojjechaa jiru yoo hubate qofaadha.
Amma egaa, gamtichi hundeefame; miidiiyarrattis maaal hojjechuuf akka karoorfate uummatati beeksifate. Kana booda wanta waraqaa irratti waliigaalame, dhaabbilee shananiin, mallattteefame gara hojii qabatamaatti jijjiiruun barbaachisa dha. Yoo kun ta’uu baate, uummanni ijaaramuu gamataa kanaatti gammadde ture, deebi’ee itti gadduunsaa hin hafu.
ABOn gamataa akkasii waggoota digdaman darban keessatti dhaabbille adda adda wajjin uumaa turuunsaa ni beekama. Garuu, gamataan dhaabbatte ji’a muraasa booda diigama. Achii kan biraatu ijaarama; ammas ni diigama. Kana malees, ABOn maataansaa rakkina hedduu ofkeessa qaba. Baroota darban keessa, ABOn bakka afuritti ykn shanitti yeroo qoodamu nidhaggeenya. Xinno turani immoo warreen addaan baaneera; waliin hojjechuu hindandeenyu jedhan, yeroo isaan walitti deebineera jedhanii miidiiyaarratti oodeesan dhageenya. Yeroo muraasa booda immoo waliin hojjechuu hindandeenye jedhani yeroo isaan walkomatan dhageenya. Dhaabbilee siyaasaa keessatti waldhabuun kan jiruu dha. Kan ABO garuu adda. Tokkoomuu dhabuun namoota ABO hoogananii, uummata Oromoo nufisiiseera;abdiis kutachiisaa jira. Kanaaf, ABOn, kanarratti yeroo kamiyyuu caala hojechuu qaba jedheen amana.
ABOn dhaabbilee siyaasa uummatoota biraa bakka bu’an wajjin hojechuuf murteesuunsaa gaariidha. Garuu, hunda caalaa, dhaabbilleen siyaasaa Oromoo bakka bu’anii bilisummaa uummata Oromoof qabsa’aan, walitti dhiyaatanii garaagarumma gidduu isaanii jiruu furatanii wanta Oromoof tola jedhan waliin hojjechuu qabu jedheen amana.
Yeroo amma kanatti uummanni Oromoo yeroo kammiyyuu caalaa mirgasaaf qabsuuf kutatee ka’eera (haala qabatamaa amma Oromiyaa keessa jiru nama hordofuuf kana hubachuun nama hindhibu). Haata’u malee, dhaaba cimaa uummata kana hoogannu fi ijaaruu barbaada. Kanaaf ABO fi dhaabbilleen uummata Oromoo bakka buuna jedhan hundi yeroo kamiyyuu caalaa tokkoomuu qabu. Akkasumas, dhaabbbilee uummata biraa bakka bu’anii fi dhaabbilee siyasaa Oromoo wajjin kaayyoo walfakkaatu kannneen qabanii wajjin gamtaa yookaan/adda uummachuun barbaachisaa dha.
Kun ta’uu baannaan, uummanni Oromoo akkuma barame ajjeefamaa, hidhamaa fi lafa isaarraa buqqifaamaa jireenya gadadoo itti fufa jechuudhaa.
WAAQAYYO WAL NU HAATAASISU!
WARRA ADDAAN BAANE WALITTI
Published October 31, 2015 December 25, 2015
Previous Post 2015 FREEDOM HOUSE REPORT: Freedom On the Net
Next Post The Oromia Media Network** Board of Trustees expresses Strong Opposition to the Master Plan for Addis Ababa